चर्चामा युएसबी कण्डम : के हो यो ? यसले के काम गर्छ ? कसरी प्रयोग गर्ने ? – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २९, २०७८ समय: १७:५९:१२
एजेन्सी। युएसबी कण्डमः झ्वाट्ट सुन्दा परिवजार नियोजनको साधन होकि जस्तो लाग्छ। तर यो परिवार नियोजनको साधन होइन। यो एक किसिमको प्रोटेक्सन हो जसले अहिलेको एन्ड्रोइड प्रविधिको स्मार्टमा दुनियाँमा खतरनाक संक्रमणबाट बचाउने काम गर्छ।